”Ka gorgortami mayno BADEHEENNA!” – Kooxda Al Shabaab oo digniin u dirtay Kenya | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Ka gorgortami mayno BADEHEENNA!” – Kooxda Al Shabaab oo digniin u dirtay...
”Ka gorgortami mayno BADEHEENNA!” – Kooxda Al Shabaab oo digniin u dirtay Kenya
(Muqdisho) 22 Sebt 2019 – Hoggaanka kooxda Al-Shabaab, Ahmed Diriye, ayaa soo saaray digniin uu u jeediyay reer Galbeedka oo uu ku eedeeyay inay dhicitaanka khayraadka Somalia u hoosaasinayaan Kenya iyo Itoobiya, isagoo gaar ahaan Kenya ku dhaleeceeyay sheegashada dhul-badeedka Somalia.
Farriintan uu soo diray oo ah middii ugu horreeysey tan iyo 2016-kii isla markaana 20 daqiiqadood ah, ayuu uga hadlay in Maraykanka iyo Britain ay hoggaaminayaan qorshahan lagu ”dhacayo ceelashada saliideed ee Somalia, isla markaana lagu xaabsanayo kalluunka Somalia, iyadoo badahana loo gacan gelinayo Kenya iyo Itoobiya” sida uu yiri.
Diriye, oo bedeley Axmed Godane oo uu Maraykanku ku khaarajiyay weerar cirka ah Sebtember 2014, ayaa Kenya uga soo hor jeestey muranka ay ku sheeganayso dhul-badeed ku fadhiya 100,000 KM oo jibbaaran oo ay horraanba 3 shirkadood u jartay shati ay ku baaraan, waloow haatan arrimahaa la hakiyay.
GO’AANKA MAXKAMADDA ICJ
“Waxaannu Muslimiinta ku boorinaynaa in aysan Mujaahidiintu abid aqbali doonin go’aan kasta oo kasoo baxa waxa loogu yeero ICJ,” ayuu yiri Diriye oo uu soo xigtey Daily Nation.
“Waxaan dunida u sheegaynaa inaynaan ka gorgortamin badeheenna waxaana bulshadeenna u sheegaynaa in Kenya ay horraanba qaadatay qayb ka mid ah gayigeenna.” ayuu raaciyay, isagoo taa ula jeeda dhulka NFD ee haatan Kenya hoos taga, balse sharciyan ka tirsan Somalia.
Si kastaba, xal la’aanta xasaradaha ka taagan Somalia oo ay koow ka tahay kooxda Al Shabaab lafteedu ayaa la fahamsan yahay inay Somalia ku adkaynayso inay dal ahaan u shaqeeyso, sidaa darteedna ay daneheeda ka difaacato masraxyada caalamka.
Previous articleSOOYAAL: Maxaa kala qabsaday Duq Buxuur & macallinkiisii Jarmalka ahaa?!
Next articleMadaxwaynaha dalka oo casho sharaf u sameeyay qaar ka mid maamullada dalka, qorshaha + Sawirro